Feno ny fepetra… | NewsMada
Manomboka feno tanteraka ny fepetra ahafahan’ny firenena miroso. Efa tafapetraka avokoa ireo Andrimpanjakana rehetra. Anisan’izany ny Antenimierampirenena vao nijoro farany teo. Manana ny maro anisa aoriany ny fitondram-panjakana, ankoatra ny hijoroan’ny governemanta, afaka andro vitsy.
Efa eo an-tanan’ny fitondrana avokoa ny fitaovana sy ny olona ary ny hoenti-manana miaraka amin’ny vina nampanantenaina. Efa nankatoavin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ary nahazo tohana sy famatsiam-bola, izao fitondrana izao. Tsy tokony hisy intsony ny fialan-tsiny ao anatin’izany rehetra izany. Na koa fanilihana andraikitra tahaka ny nataon’ny teo aloha, fony izy teo amin’ny fitondrana. Atombohy amin’izay àry ny asa vavany avy hatrany, hiantraika any amin’ny ativilanin’ny sarambabem-bahoaka sy ny mponina. Esory amin’ny toerany ary aza andeferana ireo tsy mahavita ny iraka sy ny andraikitra ankinina aminy. Aleo hiavaka ny vary sy ny tsiparifary na koa ireo zatra ny lalan-dririnina. Tsy tokony hisy toerana ho an’ny misalasala intsony izao.
Farito ary ataovy mazava tsara ny lalan-kombana iaraha-mjery sy manombana. Aiza ho aiza izao isika amin’ny lamasinina haingam-pandeha ? Inona ny mbola misakana na koa manahirana ?
Fotoana izao hanatanterahana ireo nambara sy notanisaina, araka ilay fiteny nambara fa asa izy ity fa tsy kabary. Ahoana ny tsy fandriampahalemana sy ny tsy filaminana manoloana ireo fitaovana maro samihafa efa azon’ny mpitandro filaminana ? Ahoana ihany ity delestazy miverimberina mahazo laka isanandro tato ho ato ity ? Miantraika mivantana amin’ny sosialim-bahoaka amin’ny ankapobeny mihitsy : fiakaran’ny vidim-piainana, ny lafiny fitsaboana sy ny fanadiovana izany, indrindra eny anivon’ny hopitaly. Ny olan’ny fananan-tany tsy ahitana mangirana hatramin’izao. Ny mbola fihanaky ny kolikoly sy ny fomba hampihenana izany amin’ny sehatra samihafa eto amin’ny firenena.
Ampahany ihany ireo. Tsy vitan’ny fisehosehoana fotsiny na resabe intsony izao fa mitaky andraikitra amin’ny rehetra. Tokony hanomboka izany ary ho fitaratra ny mpitantana isan’ambaratongany… Roso toy tsa mipody koa… Efa feno tanteraka ny fepetra ka tsy tokony hisy intsony ny olana na fialana bala ?